Verenga #MyHodgesStory Nyaya Yekubudirira Kwevadzidzi »Hodges University
Nhoroondo dzeVadzidzi Dzakabudirira
Vanopfuura zviuru gumi # MyHodgesStory's vaudzwa. Yekutanga-chizvarwa vadzidzi vekoreji, vadzidzi vekare, mamirioni-emadhora emadhora epamba mabasa, #HodgesHeros, mubereki mumwe akapedza kudzidza…. nyaya yemunhu wese yakasarudzika. Chinhu chimwe chinoramba chiri chechokwadi kune vese ndechekuti ivo vaive nehushingi uye kutyaira kutora nhanho yekutanga.
Joinha zvikamu zvedu uye uve kurudziro kune ramangwana Hawks neyako wega mudzidzi kubudirira nyaya.
Ndezvipi Zvako #MyHodgesStory? Tanga rwendo nhasi!
Mutungamiriri weYunivhesiti & Alumni (BS & MBA)
"Sevadzidzi vazhinji veHodges, ndakatanga zvidzidzo zvangu zvepamusoro mushure mehupenyu uye ndaifanira kudzikamisa basa renguva yakazara, mhuri, uye kukoreji."
Ndeipi nyaya yekubudirira yaunoda kutaura? Regai isu tikubatsire iwe kuwana yako nzira yekubatana nezviuru zveanodada maHodges vanopedza kudzidza nhasi.
Muridzi Maid Pro
Eliana Tardio - Kutaurirana neMedia
Nei Uchisarudza Hodges?
“Ndinoda Muzvinafundo [Andrea] Fortin, uye ndinokudzwa kuti akandisarudza kuve Mudzidzi weMwedzi. Anogara akagadzirira kubatsira, musuwo wake unogara wakavhurika vadzidzi vake, uye anoshanduka zvakanyanya uye ane hunyanzvi kana zvasvika pakushanda nevadzidzi vakuru seni. "Ndinozvifarira chaizvo izvi, uye ndinogona kutaura chokwadi kuti kubatana kwakandibatsira kuzadzisa chiroto ichi chekupedza kudzidza muU.S., uye ikozvino, ndichishanda ndakananga padhigirii raTenzi wangu."
“Unonzwa kufemerwa uye kukurudzirwa kuwedzera hunyanzvi hwako uye kuve nehunyanzvi, kuve wega bhosi, uye nekuita shanduko iwe yaunoda kuona ichiitika munyika. Kuwana degree hakusi kwemusoro wenyaya. Ndezve ruzivo rwunoshandura iwe kuti uve munhu kwaye "
Mutungamiriri ALS Clinic
Amelia Vasquez - Bhizinesi Rekutungamira Vatatu-Nguva Vakapedza Kudzidza
“Ini ndaifanira kuisa mari mukati mangu. Ndakafunga kuti [kudzokera kuchikoro] kunopa mikana iri nani nekugadzira ramangwana idzva, uye ndinogona kuva muenzaniso unobudirira kuvana vangu, ”akadaro. "Ini ndaida kuwana ruzivo rwakawanda uye hunyanzvi hwandinozokwanisa kubatanidza bhizinesi kana basa ramangwana. ”
Kuwana madhigirii maviri mumakore mana Amelia cakarega kupa nguva yakafanira nevana vake, achipedzisa basa rake rekuchikoro uye nekupa yakanakisa vhezheni yake pabasa, Vasquez akaita kuti ishande uye akapedza iye MBA muna 2002.
"Ndinoonga kubudirira kwangu kune vese vapurofesa vane shungu uye vakazvipira kuHodges…" unogona kuita izvi, "" tevera zviroto zvako. " Ndakange ndakashongedzwa neconfidence iyo yakabva yandisunda kubudirira, ”akatsanangura kudaro. "Ndine chivimbo, ndinotyaira uye ndine shungu, uye ndinokurudzira chero munhu arikufunga zvekudzokera kuchikoro kunotarisa kuHodges."
VP yeKushandisa Cable USA
Kayla naRyan Harp
Veteran Vakapedza Kudzidza